Raysulwasaaraha Soomaaliya oo magacaabay guddiga doorashada heer federal iyo guddiga xalinta khilaafaadka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaRaysulwasaaraha Soomaaliya oo magacaabay guddiga doorashada heer federal iyo guddiga xalinta khilaafaadka
November 5, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Raysulwasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddiga doorashada heer federal iyo guddiga xalinta khilaafaadka, sida ku xusan waraaq ka soo baxday xafiiskiisa.
Guddiga doorashooyinka heer federal ayaa ka kooban 25 xubnood kuwaasoo ay kamidyihiin xubno ay soo gudbiyeen dowlad goboleedyada, taasoo qeyb ka ahayd heshiiskii Muqdisho ee bishii lasoo dhaafay ay gaareen masuuliyiinta sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah.
Sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka ee uu raysulwasaaruhu magacaabay ayaa ka kooban 12 xubnood.
Soomaaliya ayaa qorshuhu yahay in horaanta sanadka 2021 ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha.
Magacyada Guddiyada hoos ka akhriso: